Doorasho Caynkee ah Ayaa Soomaaliya ka dhacaysa 2020-2021? (Qaybta kowaad) - Horseed Media • Somali News
January 5, 2020Featured
Doorasho Caynkee ah Ayaa Soomaaliya ka dhacaysa 2020-2021? (Qaybta kowaad)
Gabar ka tirsan Baarlamaanka oo doonayasa Madaxweynaha 2017
Sida uu qabo Dastuurka Federaalka Soomaaliya waa in dalka afartii sanaba hal mar doorasho ka dhacdo. Doorashadii sadeddexaad ee dalka gudihiisa ka dhacaysa wakhtigeedi waa soo dhowaadey, Waxaana mugdi weyn ku jirta qaabka doorasho ee dalka ka dhici doonta. Haddaba waxaan isku dayaynaa in aan akhristayaasha la wadaagno aragtiyada iyo waxa aan ka fahmney Sharciga Doorashada, Xeerka Xisbiyada, Doonitaanka Beesha Caalamka ee taageera Soomaaliya, Damaca Dowladda uu Madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Riyada Xisbiyada Qaran iyo doorka Dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
Qaybta Labaad waxaan uga hadleynaa Sharciga Doorashada, Damaca Madaxweyne Farmaajo, Doorka Dowladaha xubaha ka ah Federaalka, Waxa beesha caalamku dooneyso iyo qorshaha cid kasta u qarsoon Plan B.
Waa cilmi-baare ka tirsan Mac-hadka Diraasaadka iyo Cilmi-baarista ee Hayaan oo fadhigiisu yahay magaalada Garowe
Faaduma Mursal Diiriye says
Inshallah waxaan rajayneynaa in ay dalku ka dhaco doorasho qof iyo cod ah
Cabdulkhaaliq Bashiir Faarax says
Anuu waxaan qabaa inaan waxba la sheegsheegin ee ciddii rabtaaba ha ku soo baxdeeh doorasha uun la qabto, oo wiliba xataa hal xaafad uun laga qabto. Waayo kala fadhi ka roon! Candhoba waa xumin ee haddiiba doorashaba la qabto waa uun sed.
deeq Nur says
Wallaal wa ku mahadsantahay xogta iyo faahfahinta aanan laheyn xigasho siyaasadeed. Runti wan u hanweynahay qeybta labaad.